Dharka Caafimaadka, Dharka Dibedda, Labiska Shaqada - qiangwei
Suut Go'doon Hal-xabbo ah
Goonooyinka Gooni -isutaaga
Dharka Caddaynta Qorraxda
Dhar caadaysan oo dheeraad ah
Hangzhou Qiangwei Dharka Co., Ltd. wuxuu ku yaal Hangzhou quruxda badan, Zhejiang. Waxaa la aasaasay 1997 oo leh caasimad diiwaangashan oo ah 110 milyan yuan. Waxaa jira in ka badan 600 nooc oo qalab ah, waxaana lagu qalabeeyay qalab dhar u dhigma oo dibadda laga keenay (sida: mashiinka tolidda xawaaraha sare, mashiinka dahaarka ah, maqas koronto oo Mareykan ah, iwm). Hadda waxay u samaysatay soo -saare xirfadle ah oo isku -dhafan naqshadeynta, wax -soo -saarka iyo iibinta. Shirkaddu waxay leedahay in ka badan 600 oo shaqaale, aag dhisme oo ah 10,000 mitir oo laba jibbaaran, iyo awoodda wax -soo -saarka sannadlaha ah ee 1.2 milyan oo nooc. Intaa waxaa dheer, shirkaddu waxay kaloo leedahay warshad daabac ah iyo warshad aan saxaafad lahayn oo dhar ah.
warar iyo xog
Shiinaha ayaa noqday dalka ugu weyn ee soo saara dharka iyo dhoofinta dharka
Tan iyo markii Shiinaha ku biirtay WTO, dharka iyo dharka ayaa qayb muhiim ah ka noqday dhoofinta Shiinaha. Tobankii sano ee la soo dhaafay, iyada oo si tartiib tartiib ah loo baabi'iyay nidaamka kootada dhoofinta, dharka Shiinaha, dharka iyo dhoofinta dharka ayaa leh jawi dibadeed oo dabacsan. Favora ...
Falanqaynta xaaladda soo dejinta iyo dhoofinta ee warshadaha dharka Shiinaha ee 2020
Maaddaama uu yahay waddan weyn oo dhoofinta dharka, xaddiga dhoofinta dharka ee Shiinaha ayaa ka badan 100 bilyan oo doollarka Mareykanka ah, taas oo aad uga badan xaddiga dhoofinta dharka. Si kastaba ha noqotee, isbeddelka qaab -dhismeedka dhaqaalaha Shiinaha sannadihii la soo dhaafay, warshadaha dharka ayaa si tartiib tartiib ah ugu iibsaday ...
Shiinaha waa dhoofinta dharka weyn, laakiin macaashka ganacsi ee uu leeyahay ayaa sii yaraanaya
Maaddaama oo ah dhoofiyaha ugu weyn ee dhoofinta, Shiinuhu wuxuu dhoofiyaa in ka badan annaga $ 100 bilyan oo dhar ah sannad walba, oo aad uga badan soo dejinta. Si kastaba ha noqotee, isbeddelka qaab -dhismeedka dhaqaalaha Shiinaha sannadihii la soo dhaafay, warshadaha dharka ayaa si tartiib tartiib ah u galay marxaladda qaangaarka ah, iyo qeybaha wax soo saarka ayaa leh gr ...
Taleefan ： 0086-13868068082
Iimayl ： 406511249@qq.com
Cinwaanka ： Da 'tuulo, waddada Chongxian, degmada Yuhang, Hangzhou, Shiinaha